New York ရဲ့ပန်းခြံတစ်ခုမှာ အနမ်းခြွေခဲ့တဲ့ Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin
On June 18, 2018 June 19, 2018 By Angel
စိတ်မကောင်းပေမယ့်လည်း ရေးရပါအုံးမယ်။ Justin ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးချင်ခဲ့တာမှန်ပေမယ့် Selena နဲ့အချစ်ရေးသာ ရေးချင်ခဲ့မိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ Justin တစ်ယောက် Selena မဟုတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ဦးနဲ့ အနမ်းခြွေနေတဲ့ video ဖိုင်တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပြီး video ထဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ဘဲ Justin ရဲ့ instagram မှာ Justin ကိုယ်တိုင်တင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီသတင်းက အမှန်လို့ ယူဆလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ Justin ကတော့ အသက် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး Hailey ကတော့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ Brooklyn’s Domino Park ရဲ့ မြစ်ကမ်းနဘေးတစ်နေရာမှာ နှစ်ယောက်အတူ မက်တပ်ရပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းနေခဲ့တာကို ပန်းခြံအတွင်းရှိသူတစ်ဦးက video ခိုးရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီလိုသတင်းထွက်နိုင်တာ သိသိကြီးနဲ့ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ တမင်တကာနမ်းခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးစုံတွေဟာ ပရိသတ်တွေဆီမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီလိုနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့တော့ မသိလို့နမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
here’s the video of justin and hailey kissing
A post shared by justinbieber (@videosbelieber) on Jun 17, 2018 at 7:52am PDT
Justin beğenmiş ? @justinbieber #justinbieber
A post shared by J – H ?? (@jaileyfactstr) on Jun 18, 2018 at 2:00am PDT
Hailey BaldwineJustin Bieber em Nova York, 17 de Junho. #haileybaldwin #justinbieber
Justin နဲ့ Hailey တို့နှစ်ဦးဟာ သူတို့ရဲ့ fans တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အရမ်းပျော်နေကြပုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ video ဖိုင်တက်လာပြီးနောက်မှာတော့ Jelena fan တွေကတော့ အသဲကွဲရင်းစိတ်မကောင်းရင်း ကြေကွဲနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Music NewsCelebrityDating Newsjustin
PREVIOUS POST Previous post: လက်ဖျံရိုးပေါ်က ချစ်သူဟောင်းရဲ့ Tattoo ပုံကို ပုံစံပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့ Pete Davidson
NEXT POST Next post: အဖေများနေ့မှာ ဇနီးသည်ဆီက ကြည်နူးစရာလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ Adam Levine